फुलबारीमा सशस्त्र प्रहरीको ३४ नम्बर गणको उद्घाटन – मुलधार न्युज
Home > समाचार > फुलबारीमा सशस्त्र प्रहरीको ३४ नम्बर गणको उद्घाटन
२० पुष २०७५, शुक्रबार २१:३८
काठमाडौं-सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वि.ओ.पि. फुलबारी नम्बर ३४ नम्बर गण हेडक्वाटरको शुक्रवार धनगढीको फुलबारीमा स्थापना गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड र सुदूरपश्चिम शसस्त्र प्रहरी प्रमुख डिआईजी नागेन्द्र थापाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वि.ओ.पि. फुलबारी नम्बर ३४ नम्बर गण हेडक्वाटरको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख वडले अबैध चोरी निकासी तथा सिमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा अव सहयोग पुग्ने बताए । सिमामा हुने अपराधिक गतिविधीहरु कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नु तपाईहरु लाग्नुहोस नगरप्रमुख वडले भने, यसमा स्थानीय सरकार रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छ ।
खुला सिमानाका कारण लागु औषधको दुब्र्यसन तथा कारोवार बढेको गुनासो आईरहेको छ नगरप्रमुख वडले भने, यसका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं । शसस्त्र प्रहरीको सक्रियताले चोरी निकासी केही हद सम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको डिआईजी थापाले बताए ।
हामी सक्रियताका साथ लागेका छौं डिआईजी थापाले भने, स्थानीयको सहयोग बिना सिमामा हुने अपराध रोक्न सकिदैन । उनले आफुहरु बर्दी लगाएको शसस्त्र प्रहरी भएपनि नागरिकहरु बर्दी नलगाएको प्रहरी भएको बताए ।
पछिल्लो समयमा कैलालीमा लागु औषधको दुब्र्यसन गर्नेहरुको संख्या बढेको भन्दै सबैतिर चिन्ता ब्यक्त हुने गरेको छ ।